Nei Pasina Kukakavara Kwakasimba? | Martech Zone
Svondo, Ndira 20, 2008 Chipiri, Gunyana 4, 2011 Douglas Karr
Kune mwana mutsva pachivhariso padivi remashoko ebhizinesi, Kukakavara Kwakasimba. Pfungwa yebasa yakatanhamara - ipa repakati repamusorosoro kuteedzera zvirevo zvevashanyi vako, wedzera chirevo kupfuura blog rako, uye upe chimiro chakapfuma kwazvo kuratidza zvirevo.
Hazvina kukosha asi zvichiri kunetsekana nevimbiso kubva kuDhivhizheni Yakasimba yekuti iwe unogona kutumira zvaunotaura kana iwe wafunga kumbosiya basa. Iyo piritsi yakaoma kumedza… kunyanya kana vakangosiya basa ravo ndokuvhara saiti.
Tags: 2 vanyoriarunvanyori papositikuchenesacoauthoryakananga trafficeolsonkusimudzira chiitikojramersListskushambadza chiitiko kusimudziraMichael StelznerSliderwordpress vanobatanidza vanyoriwordpress coauthorWordpress vanyori vakawanda
Kuda kuziva? Unofanira kuva!
Jan 20, 2008 na9:21 PM
Imhando yepfungwa inonakidza… kuendesa mablog ako ekutaura kune imwe sevhisi. Zvingangobatsira nenyaya dzespam. Zvinoita kuti ndishamise kuti ndechipi chimwe chaungagone "outsource" mubhurogi rako (uye paflip side, ndedzipi mhando dzemasevhisi ebhurogi anogona kupihwa).
Nhoroondo yavo yeAlexa traffic inoratidza maviri makuru spikes. Izvo zvichave zvinonakidza kuona kana iyo sevhisi inogona kukura nekubata nekuwedzera kudiwa. Sezvinei nemazhinji mablogiki-mhando masevhisi, kana akakura nekukurumidza uye asingakwanise kubata mutoro, anoita kuti mablogi avo ese atakure zvishoma uye vashandisi vanogona kusvetuka ngarava.
Jul 21, 2008 na5:36 PM
Hi Douglas. Thanks nekutumira nezve IntenseDebate. Ndinoda kutaura zvinokunetsa zvishoma. IntenseDebate inopa mutengesi kunze kweWordPress iyo inoisa zvaunofunga zvakananga kumashure muWordPress' proprietary comment system.
Panyaya yekuisa makomendi akaitwa muIntenseDebate zvakanangana muShoko rako reWordPress se backup, indexing comments, uye API yedu (pakutaura kwaNoa pamusoro), isu tine mamwe mahombe maficha ari kuuya pasi mumutsara munguva pfupi iri kutevera! Ini handikwanise kudurura bhinzi paruzhinji parizvino (kunyangwe ndichifungidzira kuti ndangozviita), asi ngatingoti rondedzero yako yese yezvishuwo ichavharwa pamwe netani yezvimwe zvinokatyamadza maficha.
Tiri kutsvaga vanoedza beta kune yedu iri kuuya WordPress plugin vhezheni 2.0. Kana iwe uchida kuziva zvimwe nezve anoshamisa maficha anosanganisirwa mune ino uye kupinda pabeta runyorwa ndapota nditumire email pa support@intensedebate.com. Ndinoda kuva newe uchishandisa IntenseDebate.